Sharciga: Daryeelka, da'da ogolaanshaha way kala duwan tahay Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Da'da ogolaanshaha
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee waalidiinta, dugsiyada, dhalinyarada iyo hay'adaha sharci ee maanta ayaa ah in laga caawiyo dhallinyarada qaangaarka ah inay si ammaan ah u socdaan aagga fiidkii ee u dhexeeya 16 sano iyo 18 da'da. Tiknoolajiyada internetku waxay abuuraysaa abuurista iyo gudbinta sawirrada galmada ee la heli karo qof walba oo leh casriga, oo ay ku jiraan ilmo kasta. Dembiyada jinsigu waa 53% tan iyo 2006-7 sida laga soo xigtay tirooyinka 2015-16 ee ay bixisay Dawladda Scottish-ka. Korodhka weyn ee warbixinta dembiyada galmada ee qeyb ka ah saameynta Savile iyo habka 'aan loo dulqaadan' habka booliska iyo dacwad-qaadista. Korodhka weyni wuxuu sidoo kale isweydaarsadaa fursadaha internetka ee ugu weyn. Miyay suurtogal u ah in la kordhiyo galitaanka internetka ee suuqyada internetka sidoo kale waa arrin muhiim ah?
Sharciga ku saabsan dembiyada galmada ee ku jira England iyo Wales iyo Scotland wuxuu tixgeliyaa qofka dhalinyarada ah "ilmo", oo u baahan badbaado, ilaa da'da sanadaha 18.
Si kastaba ha noqotee da'da ogolaanshaha galmada galmo waa sanadaha 16. Qaar badan oo qaangaar ah ma oga in inkastoo ay ka weyn tahay da'da ogolaansho galmoodka, looma oggola inay sharciga u qaataan is qabqabsi iyo u diraan illaa ay ka yihiin da'da 18. Haysashada sawirrada 'carruurta' iyadoon raali laga ahayn. Ilmo hoos yimaada 13 ma, xaalad kasta, waxay leedahay awood sharci ah in ay ogolaato nooc kasta oo ka mid ah waxqabadka galmada.
Sharciga aaggan waxaa loogu talagalay in lagu dabaqo ragga waaweyn iyo qaybta yar ee haweenka leh xiisaha ay u hayaan carruurta kuwaas oo ay qorsheynayaan in ay galmo la yeeshaan ama kuwa doonaya in ay ku lug yeeshaan carruurta dhilleysi ama fara-xumeyn. The sharciga England iyo Wales ayaa leh "Carruurta ku lugta leh dhillaysiga ayaa ugu horrayn dhibbaneyaasha xadgudubka iyo dadka ka faa'iideysta iyaga oo ka faa'iidaysanaya, waa kuwa ku xadgudba carruurta."
Hadda fasiraadda adag ee "ilmaha" micnaheedu waa in dhalinyaradu ay kufilanayaan rabitaankooda galmada, iyagoo gacan ka helaya tiknoolajiyada cusub, waxaa lagu eedeyn karaa dembi galmo oo culus.
Dabcan xeer ilaaliyeyaashu way ka taxadaraan inay eegaan dhammaan duruufaha oo waxay calaamadiyaan kiiska dacwad-qaadista haddii ay ku jirto danta dadweynaha inay sidaas yeelaan.
Waxay xisaabta ku darsan doonaan arrimahan sida farqiga da'da ee udhexeeya labada dhinac, is-dhexgalka dhinacyada kala duwan ee ku saabsan jinsiga, jirka, dareenka iyo horumarka waxbarashada iyo nooca xiriirkooda.
2014 oo ku taala Ingriiska, ayaa la baaray ka dib markii ay u dirtay sheeko qashin ah iyada oo saaxiib la ah. Kadib wuxuu helay digniin ah inuu sawirka u soo gudbiyay saaxiibadiis kadib markii gabadhiisu ay joojisay inay noqoto lamaane. Sharci cusub, Habdhaqanka Xad-gudubka iyo Sharciga Dhibaatooyinka Galmada, waxay la macaamilaysaa 'aargoosiga qaawan' ie gudbinta sawirada galmada ogolaansho la'aan. Ka eeg bog gooni ah aargoosi porn waxa on.
Arrinta halkan waa maqnaanshaha ama jebinta ogolaashaha. Nidaamka 'aan loo dulqaadan' lahayn ee hawshani waxay u muuqataa in ay ku ansixiyeen hay'adaha xeer-ilaalinta iyo booliiska gudaha UK sidoo kale.
Waa maxay Oggolaanshaha Sharciga? >>